galmada iyo guurka , galmo la'aan waa fashil aqriso - iftineducation.com
galmada iyo guurka , galmo la’aan waa fashil aqriso
iftineducation.com – fahanka galmada ee labada lamaane ayaa ah as­aaska guurka guuleysta , si loo gaaro ujeedkaasi waxaa muhiim ah in uu jiro xariir wanaagsan xiliga galmada iyo in si cad ah la isugu sheego waxa ay labada lamaane dareemayaan xiliga cayaarta socoto . Waxa ayna tani keeneysaa in in labadaba ay gartaan waxa midka kale raaxo uu ka helayo isla markaana kaga boganayo illaa uu ka gaaro heerka gariirka galmada .
Ragga ayaa dareema kacsi marka uu si saraaxad leh u ogaado waxa ay lamaantiisa dooneyso , waxaana haweeneyda la gudboon in ay ogaato in ay xaq u leedahay in ay ninkeeda u sheegto sida iyo habka ay raaxada ku heli karto si uu ugu sameeyo . Is fahanka sariirta oo la isu sheegto qofba sida uu macaanka galmada ku heli karo ayaa keenta in labada lamaane dareemaan dharag galmo oo ay raali isaga yihiin .
Daawo Laba gabdho oo muuqaal galmo soo duubay
ha kacsan hadaad aqrisatay yaah
gabdho somali is wax waxeynaayaan nin la’aan maa jirto daawo yaabkaan
Deepika Padukone Oo Noqatay Qofta Ugu Horaysay Ee Ka Qeyb Gasho Barbaamijka Big boss 10 Ee Salman Khan